Wararka Maanta: Axad, Nov 28, 2021-Nin eey uu baabuur jiidhsiiyay Hargaysa loogu maxkamadaynayo
DR Cabdiqani Cali Waran Cadde oo ah mulkiilaha eey-ga baabuurku jiidhay ayaa sheegay in uu eey-ga ka keenay dalka Jarmalka si uu ciidamada Somaliland uga caawiyo baadhista danbiyada.
"Dhawaan ayaanu waddanka keenay, waxaanu ka keenay Jamalka, baasboor ayaya leeyihiin, hadaf ayaana nu u keenay, waxaanu doonaynay in ay ka qayb galaan la dagaalanka amni darada, waxaana nu doonaynay in aanu ku wareejino laamaha amniga" ayuu yidhi Waran Cadde.
Waxa uu sheegay in ninkii baabuurka watay ay fajiciso ku noqotay kadib markii ay u qabsadeen, isagoo u qaadan waayay in eey loo qabsado, taasina ay kaliftay in ay xidhaan, oo sharciga la tiigsadaan.
"Maalin dhawayd waxaa dhacday walal eey-gii oo inan aanu walaalo nahay wada socdaan, xagaa laamiga kadibna gaadhi ayaa jiidhay inankii gaadhiga watay wuu u qaadan kariwaayay oo in eey la jiidho wax fudud ayuu u haystay, ma eey ayaa la ii haystaa?, ayaa hadaladisii kamid ahayd sidaa darteen ayaanu sharciga u gaynay" ayuu yidhi Waran Cadde.
Eeyda asal ahaan kasoo jeeda dalka Jarmalka ayaa lagu tilmaama nooca adduunka ugu fiican xaga baadhista danbiyada iyo caqli badnaantooda, waxaana tusaale u ah Eeyga Ring ting ting ee taariikhda shirkadaha filimada Maraykanka baal dahab ah kaga yaal, kaasi oo noqday xidig filimada jila xiliyadii 1920 yadii.